2020 ရဲ့ ပထမဆုံး Minor ပွိုငျပှဲ WePlay! Bukovel Dota2 Tournament Preview – Gaming Noodle
Dota Pro Circuit 2019-2020 ရဲ့ ဒုတိယ Major ဖွဈတဲ့ Bukovel Minor ကိုတော့ ဇနျနဝါရီ ၉ ရကျကနေ ၁၂ အထိ ကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။ ယူကရိနျးနိုငျငံ Bukovel မွို့မှာ ကငျြးပမှာဖွဈပွီး Time Zone က မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ၄ နာရီခှဲခနျ့သာ ကှာခွားတာမို့လို့ ပွညျတှငျး Dota2 ပရိသတျတှေ စောငျ့ကွညျ့ဖို့ လှယျကူစမှောပါ။ ပွညျတှငျး Dota2 Casting Page အကုနျနီးပါး ပွဖို့ရှိတဲ့အပွငျ eGG Network မှာလညျး ပွမှာမလို့ တိုကျရိုကျကွညျ့ရှုဖို့ လှယျကူစပေါတယျ။
ပုံမှနျဆိုရငျ Minor ပွိုငျပှဲအမြားစုဟာ ပရိသတျစိတျဝငျစားမှုနညျးပါးလေ့ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခါမှာတော့ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိပွီးသား အသငျးတဈသငျးဖွဈတဲ့ Nigma (ex-Liquid) ပါဝငျလာတာကွောငျ့ အရငျ Minor တှထေကျ စိတျဝငျစားမှု ပိုမြားနိုငျပါတယျ။ စုစုပေါငျး ဆုကွေးငှေ ဒျေါလာ ၃၀၀,၀၀၀ နဲ့ DPC Point 660 ပေးအပျမှာ ဖွဈပမေယျ့ ခနျြပီယံအသငျးသာ Leipzig Major ကို တကျရောကျခှငျ့ရရှိမှာမလို့ ပထမရရှိရေးကိုသာ ဦးတညျပွီး ဖောငျဖကျြ ကစားကွရမှာပါ။
ဒီပွိုငျပှဲမှာ မေးရမယျ့ မေးခှနျးကတော့ ဘယျသူဗိုလျစှဲမလဲ ဆိုတာထကျ ပရိသတျအကွိုကျ Nigma ကို ဘယျသူစိနျချေါနိုငျမလဲလို့ မေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကဲ… ပါဝငျမယျ့ အသငျးတှကေို တဈခကျြကွညျ့ရအောငျ။
EE-sama ပရိသတျတှရှေိကွလား? EE တဈပေါကျလြှမျးလြှမျးတောကျလို့ ယုံကွညျမယျ့သူတှအေတှကျ Fighting Pandas ကို အားပေးနိုငျပါတယျ။ ကနဒေါနိုငျငံသား ၄ ယောကျပါဝငျတဲ့ ဒီအသငျးကိုတော့ စာရေးသူအနနေဲ့ အမြားကွီး မြှျောလငျ့မထားပါဘူး။ Aui_2000 တို့ MoonMeander တို့လို့ Oldies တှကေို သံယောဇဉျအနညျးငယျ ရှိသေးပမေယျ့ Nigma ကိုကြျောပွီး ဗိုလျစှဲဖို့ကတော့ EE-sama ကြောကျထမယျ့ တဈကှကျကိုသာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
CSGO မှာ နာမညျရပွီးသား ဘရာဇီးအခွစေိုကျ Furia Esports လို အဖှဲ့အစညျးမြိုးက Dota2 ဖကျဝငျလာတာကို ကွိုဆိုပမေယျ့ Dota မှာ သိပျမဖွဈထှနျးတဲ့ တောငျအမရေိကနိုငျငံသားတှနေဲ့သာ ဖှဲ့စညျးထားတာမလို့ အိမျဖွညျ့လို့သာ ယူဆခငျြပါတယျ။ နာမညျရှိပွီးသား ကစားသမားဆိုလို့ အရငျ Pain Gaming က Support Player “Duster” တဈယောကျသာ Captain အဖွဈပါဝငျလာပါတယျ။ အုပျစုအဆငျ့ကြျောရငျပဲ ရှတေံဆိပျဆု ပေးသငျ့နပေါပွီ။
TI9 ပွီးကတညျးက တောကျလြှောကျ လကျစှမျးပွလာခဲ့တဲ့ Gambit ကတော့ နောကျဆုံးကငျြးပခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲကွီးလို့ ဆိုရမယျ့ One Esports World Pro Invitational ပွိုငျပှဲမှာ အသငျးကွီးအမြားစု ပါဝငျသညျ့တိုငျ Evil Geniuses နဲ့ Vici Gaming တို့ရဲ့နောကျ တတိယနရောအထိ ရယူထားနိုငျပါတယျ။ အရငျ Major ဖွဈတဲ့ Chendu Major ကိုတော့ တိုကျရိုကျ Qualify ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယ Major မှာတော့ ပုံမှနျလကျစှမျးရလာတဲ့ Virtus Pro နဲ့ Na’Vi ကို အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယျ။ One Esports ပှဲမှာ အသငျးကွီးတှကေို အငိုကျမိစပေမေယျ့ ဒီ Bukovel Minor မှာတော့ အကွောငျးသိသှားပွီမလို့ အနညျးငယျ ရုနျးကနျရနိုငျပါတယျ။
Major ကို တိုကျရိုကျ Qualify ဖွဈနိုငျလောကျတဲ့ လူစာရငျးရှိပမေယျ့ Major နဲ့ ကပျလှဲပွီး Minor ကိုပွုတျကလြာတာ ၂ ခါ ရှိပါပွီ။ Raven, Kuku တို့နဲ့ အတှဲမိအောငျ Mid နရောကို US က Ryoya အစား Tier-2 အသငျးတှမှော လကျစှမျးပွနတေဲ့ ဖိလဈပိုငျ နိုငျငံသား Karl ကို ချေါယူထားပါတယျ။ ဒီပွိုငျပှဲမှာတော့ လူသဈနဲ့ အထိုငျကမြလား စောငျ့ကွညျ့ရနိုငျပမေယျ့ တတိယ Major ကရြငျတော့ Qualifier အောငျသငျ့နပေါပွီ။ မဟုတျရငျ မနှဈက DPC Season ကလို Minor မှာပြျောနတေဲ့ Boom ID နဲ့ ဘဝတူသှားပါလိမျ့မယျ။
ပွိုငျပှဲမှာ ပရိသတျအားအပေးဆုံးနဲ့ ရပေနျးအစားဆုံး အသငျးပါ။ TI9 မှာ ဒုတိယ ရရှိခဲ့တဲ့ Team Liquid ကစားသမားဟောငျးတှေ အကုနျပါဝငျတာမလို့ ထှထှေထေူးထူး မိတျဆကျပေးစရာ လိုမယျ့ မထငျပါဘူး။ တကယျက Major ကို တိုကျရိုကျ Qualify ဖွဈသငျ့ပမေယျ့ ပထမ Major ကို မပွိုငျပဲနားလိုကျတဲ့ အကြိုးဆကျတှကွေောငျ့ ပုံမှနျလကျစှမျးရဖို့ ရုနျးကနျခဲ့ပွီး Minor ကို ပွုတျကလြာတာပါ။ အမာခံပရိသတျတှေ အရှကျမရစဖေို့ လုပျဆောငျရမယျ့ တာဝနျကတော့ ခနျြပီယံဆုပါပဲ။ ဒါတောငျ Minor ခနျြပီယံဆိုတာ နိမျ့လှနျးနပွေီး Leipzig Major မှာ Top 8 လောကျရမှသာ အပွောအဆိုခံရခွငျး ကငျးဝေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
NIP ကတော့ အခုအခြိနျအထိ မနှဈက လကျစှမျးပွနျမရသေးပါဘူး။ TI9 အပွီး လူစာရငျးအပွောငျးအလဲဟာ အလုပျမဖွဈခဲ့တာကို တှမွေ့ငျနိုငျပွီး ရှမှေ့ာချေါယူခဲ့တဲ့ လူမသိသူမသိ Mid Player Skiter ကို kick ပွီး ဒီဇငျဘာ ၁၈ ရကျနမှေ့ာTANNER ကို ချေါယူခဲ့ပါတယျ။ TANNER ကတော့ Dota2 Pro ရှားပါးလှတဲ့ United Kingdom (UK) ကဖွဈပွီး နောကျပိုငျးနာမညျရလာတဲ့ Viking.gg အသငျးက ပွောငျးရှလေ့ာတာပါ။ လကျရှိလူစာရငျးနဲ့တောငျ အထိုငျမကသြေးခြိနျမှာ လူတဈယောကျထပျလဲခဲ့လို့ NIP ကိုလညျး အခြိနျပေး စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။ Gunner, Universe နဲ့ ppd တို့ရုနျးနိုငျရငျတော့ Minor Top3လောကျတော့ ဝငျနိုငျပါတယျ။
One Esports ခနျြပီယံ Vici Gaming နညျးပွ rOtK ပွောသလို “CN Dota Never Die” လို ပွောလို့ရပွီလား? DPC 2019-2020 ရဲ့ ပထမ Minor မှာ ခနျြပီယံက တရုတျအသငျး Invictus Gaming၊ ပထမ Major ဒုတိယရတာက တရုတျအသငျး Vici Gaming၊ နောကျဆုံးကငျြးပတဲ့ One Esports ခနျြပီယံကလညျး Vici Gaming။ အဲဒီတော့ ဒီတဈခါ Minor ရဲ့ တဈသငျးတညျးသော တရုတျအသငျး RNG ကိုတော့ လြှော့မတှကျသငျ့ဘူး ထငျပါတယျ။ Monet နဲ့ Setsu တို့ Core2ယောကျ ဘယျလောကျထိ ရုနျးနိုငျမလဲ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
သူလညျး Gambit နဲ့ ဘဝတူပါပဲ။ ပထမ Chendu Major မှာ ၂ သငျးလုံး ပါဝငျခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ NaVi နဲ့ VP တို့ရဲ့ ပုံမှနျလကျစှမျးအောကျမှာ Minor ကို ပွုတျကခြဲ့ရပါတယျ။ ထူးခွားတာတဈခုက ပွိုငျပှဲမရခငျ ၂ ပါတျလောကျအလိုမှာပဲ အသငျးက Offlaner “Ghostik” ကို kick ပွီး “nongrata” ကို အစမျးအနနေဲ့ ချေါယူခဲ့ပါတယျ။
nongrata ဆိုတာ အရငျ FlyToMoon တို့ WinStrike တို့လို့ အသငျးတှနေဲ့ Major တှေ Minor တှအေပွငျ TI8 အထိပါ ရောကျရှိထားဖူးပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မကွာသေးမီကမှ Dendi ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ “MR” အသငျးနဲ့တူတူ လကျစှမျးပွခဲ့ပွီး Rivalry Winter Blast ပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲခဲ့ပါတယျ။ ဒါကို စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ Team Spirit က ပွိုငျပှဲပွီးပွီးခငျြးမှာပဲ MR အသငျးကနေ ခကျြခွငျး ချေါယူခဲ့ပါတယျ။
nongrata အပွငျ OG မှာ Standin ဆော့ဖူးတဲ့ iLTW တို့ နောကျပိုငျးနာမညျရလာတဲ့ Immersion တို့နဲ့ ပေါငျးစပျလိုကျတဲ့အတှကျ Team Spirit ဟာလညျး ဒီ Minor မှာ အဆိပျရှိတဲ့ အသငျးတဈသငျး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
အနှဈခြုပျအနနေဲ့ ဒီပွိုငျပှဲမှာတော့ လူကွိုကျမြားနတေဲ့ Nigma က ခနျြပီယံဖွဈဖို့ ရာခိုငျနှုနျးအမြားဆုံးလို့ ဆိုနိုငျပမေယျ့ သူတို့ကို တားဆီးဖို့ အသငျးကောငျးတှေ ပါဝငျနတောကို တှရေ့မှာပါ။ မနှဈက Minor King လို့ဆိုရအောငျ Minor ၂ ကွိမျ ဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ NIP, စံခြိနျတငျ SEA ၄ သငျး Major မှာပါဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ GeekFam, One Esports ပှဲမှာ လကျစှမျးပွခဲ့တဲ့ Gambit, တရုတျအစဉျအလာကို ထိနျးသိမျးဖို့ ကွိုးစားမယျ့ RNG စတဲ့ အသငျးကောငျးတှေ ပါဝငျနသေေးတာမလို့ Bukovel Minor ပှဲဟာ လူစိတျဝငျစားမှုမြားမယျ့ Dota2 ပွိုငျပှဲတဈခု ဖွဈလာဦးမှာပါ။
ပွိုငျပှဲကိုတော့ ယနေ့ ဇနျနဝါရီ ၉ ရကျနေ့ မွနျမာအခြိနျ နလေ့ညျ ၂:၃၀ မှာ GeekFam နဲ့ NIP တို့ပှဲစဉျကနေ စတငျမှာဖွဈပွီး ဇနျနဝါရီ ၁၂ ရကျနေ့ တနင်ျဂနှနေေ့ ည ၁၁:၃၀ လောကျမှာ Final Bo5 ကိုကစားပွီး အဆုံးသတျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈမှာ ပှဲငတျနတေဲ့ မွနျမာ Esports ပရိသတျတှအေဖို့ Bukovel Minor က ဖြျောဖွမှေု ပေးစှမျးနိုငျမှာ အသအေခြာပါပဲ ခငျဗြာ။
Photos from WePlay! Esports
2020 ရဲ့ ပထမဆုံး Minor ပြိုင်ပွဲ WePlay! Bukovel Dota2 Tournament Preview
Dota Pro Circuit 2019-2020 ရဲ့ ဒုတိယ Major ဖြစ်တဲ့ Bukovel Minor ကိုတော့ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်ကနေ ၁၂ အထိ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံ Bukovel မြို့မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Time Zone က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ၄ နာရီခွဲခန့်သာ ကွာခြားတာမို့လို့ ပြည်တွင်း Dota2 ပရိသတ်တွေ စောင့်ကြည့်ဖို့ လွယ်ကူစေမှာပါ။ ပြည်တွင်း Dota2 Casting Page အကုန်နီးပါး ပြဖို့ရှိတဲ့အပြင် eGG Network မှာလည်း ပြမှာမလို့ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုဖို့ လွယ်ကူစေပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင် Minor ပြိုင်ပွဲအများစုဟာ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိပြီးသား အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Nigma (ex-Liquid) ပါဝင်လာတာကြောင့် အရင် Minor တွေထက် စိတ်ဝင်စားမှု ပိုများနိုင်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ဆုကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၃၀၀,၀၀၀ နဲ့ DPC Point 660 ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ချန်ပီယံအသင်းသာ Leipzig Major ကို တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာမလို့ ပထမရရှိရေးကိုသာ ဦးတည်ပြီး ဖောင်ဖျက် ကစားကြရမှာပါ။
ဒီပြိုင်ပွဲမှာ မေးရမယ့် မေးခွန်းကတော့ ဘယ်သူဗိုလ်စွဲမလဲ ဆိုတာထက် ပရိသတ်အကြိုက် Nigma ကို ဘယ်သူစိန်ခေါ်နိုင်မလဲလို့ မေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ… ပါဝင်မယ့် အသင်းတွေကို တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။
EE-sama ပရိသတ်တွေရှိကြလား? EE တစ်ပေါက်လျှမ်းလျှမ်းတောက်လို့ ယုံကြည်မယ့်သူတွေအတွက် Fighting Pandas ကို အားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံသား ၄ ယောက်ပါဝင်တဲ့ ဒီအသင်းကိုတော့ စာရေးသူအနေနဲ့ အများကြီး မျှော်လင့်မထားပါဘူး။ Aui_2000 တို့ MoonMeander တို့လို့ Oldies တွေကို သံယောဇဉ်အနည်းငယ် ရှိသေးပေမယ့် Nigma ကိုကျော်ပြီး ဗိုလ်စွဲဖို့ကတော့ EE-sama ကျောက်ထမယ့် တစ်ကွက်ကိုသာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
CSGO မှာ နာမည်ရပြီးသား ဘရာဇီးအခြေစိုက် Furia Esports လို အဖွဲ့အစည်းမျိုးက Dota2 ဖက်ဝင်လာတာကို ကြိုဆိုပေမယ့် Dota မှာ သိပ်မဖြစ်ထွန်းတဲ့ တောင်အမေရိကနိုင်ငံသားတွေနဲ့သာ ဖွဲ့စည်းထားတာမလို့ အိမ်ဖြည့်လို့သာ ယူဆချင်ပါတယ်။ နာမည်ရှိပြီးသား ကစားသမားဆိုလို့ အရင် Pain Gaming က Support Player “Duster” တစ်ယောက်သာ Captain အဖြစ်ပါဝင်လာပါတယ်။ အုပ်စုအဆင့်ကျော်ရင်ပဲ ရွှေတံဆိပ်ဆု ပေးသင့်နေပါပြီ။
TI9 ပြီးကတည်းက တောက်လျှောက် လက်စွမ်းပြလာခဲ့တဲ့ Gambit ကတော့ နောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲကြီးလို့ ဆိုရမယ့် One Esports World Pro Invitational ပြိုင်ပွဲမှာ အသင်းကြီးအများစု ပါဝင်သည့်တိုင် Evil Geniuses နဲ့ Vici Gaming တို့ရဲ့နောက် တတိယနေရာအထိ ရယူထားနိုင်ပါတယ်။ အရင် Major ဖြစ်တဲ့ Chendu Major ကိုတော့ တိုက်ရိုက် Qualify ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယ Major မှာတော့ ပုံမှန်လက်စွမ်းရလာတဲ့ Virtus Pro နဲ့ Na’Vi ကို အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။ One Esports ပွဲမှာ အသင်းကြီးတွေကို အငိုက်မိစေပေမယ့် ဒီ Bukovel Minor မှာတော့ အကြောင်းသိသွားပြီမလို့ အနည်းငယ် ရုန်းကန်ရနိုင်ပါတယ်။
Major ကို တိုက်ရိုက် Qualify ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ လူစာရင်းရှိပေမယ့် Major နဲ့ ကပ်လွဲပြီး Minor ကိုပြုတ်ကျလာတာ ၂ ခါ ရှိပါပြီ။ Raven, Kuku တို့နဲ့ အတွဲမိအောင် Mid နေရာကို US က Ryoya အစား Tier-2 အသင်းတွေမှာ လက်စွမ်းပြနေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား Karl ကို ခေါ်ယူထားပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ လူသစ်နဲ့ အထိုင်ကျမလား စောင့်ကြည့်ရနိုင်ပေမယ့် တတိယ Major ကျရင်တော့ Qualifier အောင်သင့်နေပါပြီ။ မဟုတ်ရင် မနှစ်က DPC Season ကလို Minor မှာပျော်နေတဲ့ Boom ID နဲ့ ဘဝတူသွားပါလိမ့်မယ်။
ပြိုင်ပွဲမှာ ပရိသတ်အားအပေးဆုံးနဲ့ ရေပန်းအစားဆုံး အသင်းပါ။ TI9 မှာ ဒုတိယ ရရှိခဲ့တဲ့ Team Liquid ကစားသမားဟောင်းတွေ အကုန်ပါဝင်တာမလို့ ထွေထွေထူးထူး မိတ်ဆက်ပေးစရာ လိုမယ့် မထင်ပါဘူး။ တကယ်က Major ကို တိုက်ရိုက် Qualify ဖြစ်သင့်ပေမယ့် ပထမ Major ကို မပြိုင်ပဲနားလိုက်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကြောင့် ပုံမှန်လက်စွမ်းရဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ပြီး Minor ကို ပြုတ်ကျလာတာပါ။ အမာခံပရိသတ်တွေ အရှက်မရစေဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် တာဝန်ကတော့ ချန်ပီယံဆုပါပဲ။ ဒါတောင် Minor ချန်ပီယံဆိုတာ နိမ့်လွန်းနေပြီး Leipzig Major မှာ Top 8 လောက်ရမှသာ အပြောအဆိုခံရခြင်း ကင်းဝေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
NIP ကတော့ အခုအချိန်အထိ မနှစ်က လက်စွမ်းပြန်မရသေးပါဘူး။ TI9 အပြီး လူစာရင်းအပြောင်းအလဲဟာ အလုပ်မဖြစ်ခဲ့တာကို တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ရှေ့မှာခေါ်ယူခဲ့တဲ့ လူမသိသူမသိ Mid Player Skiter ကို kick ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာTANNER ကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ TANNER ကတော့ Dota2 Pro ရှားပါးလှတဲ့ United Kingdom (UK) ကဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းနာမည်ရလာတဲ့ Viking.gg အသင်းက ပြောင်းရွှေ့လာတာပါ။ လက်ရှိလူစာရင်းနဲ့တောင် အထိုင်မကျသေးချိန်မှာ လူတစ်ယောက်ထပ်လဲခဲ့လို့ NIP ကိုလည်း အချိန်ပေး စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ Gunner, Universe နဲ့ ppd တို့ရုန်းနိုင်ရင်တော့ Minor Top3လောက်တော့ ဝင်နိုင်ပါတယ်။
One Esports ချန်ပီယံ Vici Gaming နည်းပြ rOtK ပြောသလို “CN Dota Never Die” လို ပြောလို့ရပြီလား? DPC 2019-2020 ရဲ့ ပထမ Minor မှာ ချန်ပီယံက တရုတ်အသင်း Invictus Gaming၊ ပထမ Major ဒုတိယရတာက တရုတ်အသင်း Vici Gaming၊ နောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့ One Esports ချန်ပီယံကလည်း Vici Gaming။ အဲဒီတော့ ဒီတစ်ခါ Minor ရဲ့ တစ်သင်းတည်းသော တရုတ်အသင်း RNG ကိုတော့ လျှော့မတွက်သင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။ Monet နဲ့ Setsu တို့ Core2ယောက် ဘယ်လောက်ထိ ရုန်းနိုင်မလဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
သူလည်း Gambit နဲ့ ဘဝတူပါပဲ။ ပထမ Chendu Major မှာ ၂ သင်းလုံး ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် NaVi နဲ့ VP တို့ရဲ့ ပုံမှန်လက်စွမ်းအောက်မှာ Minor ကို ပြုတ်ကျခဲ့ရပါတယ်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက ပြိုင်ပွဲမရခင် ၂ ပါတ်လောက်အလိုမှာပဲ အသင်းက Offlaner “Ghostik” ကို kick ပြီး “nongrata” ကို အစမ်းအနေနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
nongrata ဆိုတာ အရင် FlyToMoon တို့ WinStrike တို့လို့ အသင်းတွေနဲ့ Major တွေ Minor တွေအပြင် TI8 အထိပါ ရောက်ရှိထားဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မကြာသေးမီကမှ Dendi ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ “MR” အသင်းနဲ့တူတူ လက်စွမ်းပြခဲ့ပြီး Rivalry Winter Blast ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ Team Spirit က ပြိုင်ပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပဲ MR အသင်းကနေ ချက်ခြင်း ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
nongrata အပြင် OG မှာ Standin ဆော့ဖူးတဲ့ iLTW တို့ နောက်ပိုင်းနာမည်ရလာတဲ့ Immersion တို့နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အတွက် Team Spirit ဟာလည်း ဒီ Minor မှာ အဆိပ်ရှိတဲ့ အသင်းတစ်သင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ လူကြိုက်များနေတဲ့ Nigma က ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် သူတို့ကို တားဆီးဖို့ အသင်းကောင်းတွေ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ မနှစ်က Minor King လို့ဆိုရအောင် Minor ၂ ကြိမ် ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ NIP, စံချိန်တင် SEA ၄ သင်း Major မှာပါဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ GeekFam, One Esports ပွဲမှာ လက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ Gambit, တရုတ်အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားမယ့် RNG စတဲ့ အသင်းကောင်းတွေ ပါဝင်နေသေးတာမလို့ Bukovel Minor ပွဲဟာ လူစိတ်ဝင်စားမှုများမယ့် Dota2 ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်လာဦးမှာပါ။
ပြိုင်ပွဲကိုတော့ ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့ မြန်မာအချိန် နေ့လည် ၂:၃၀ မှာ GeekFam နဲ့ NIP တို့ပွဲစဉ်ကနေ စတင်မှာဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၁၁:၃၀ လောက်မှာ Final Bo5 ကိုကစားပြီး အဆုံးသတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ပွဲငတ်နေတဲ့ မြန်မာ Esports ပရိသတ်တွေအဖို့ Bukovel Minor က ဖျော်ဖြေမှု ပေးစွမ်းနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ ခင်ဗျာ။